Sawirro:- Wasiirada Hirshabeelle ayaa la horgeeyay hindise sharciyeedka Ganacsiga – XOGMAAL.COM
Sawirro:- Wasiirada Hirshabeelle ayaa la horgeeyay hindise sharciyeedka Ganacsiga
Sidoo Golaha Wasiirada Maamulka Hirshabeelle wuxuu soo dhoweeyay mideynta Canshuurta Hirshabelle oo ay Wasaaradda Maaliyadda Hirgalisay,waxaana nidaamkaasi lagu ammaanay Wasaaaradda Maaliyadda Hirshabeelle oo ay ku dooneyso horumarinta Dhaqaalaha.
By Soomaaliya	 On Oct 21, 2018
Maxamed Cabdi Waare Madaxweynaha Maamulka Hirshabelle oo shir gudoominayay Golaha Wasiirada Maamulkiisa ayaa gorfeeyey arrimo badan oo la xiriira dhinacyada amniga, dhaqaalaha,wax soo saarka, Dib u dhiska iyo iyo horumarinta arrimaha bulshada.
Sidoo kale waxaa qeyb ka ahaa arrimihii laga hadlay hirgelinta mashriicda Horumarineed ee maamulkaasi.
Goluhu waxa uu warbixin ka dhageystay Wasiirka Wasaaradda Hirshabeelle oo ku dheeraaday dhinaca amniga oo la isla gartay in la dar dargaliyo dhismaha ciidmada Hirshabelle oo la qorsheeyay dabayaaqada bishan in Hirshabelle loo tababaro Ciidamo Booliis ah oo ay Hirshabelle yeelato, sidoo kale iyana la taageero dadka isku xilqaamay la dagaalanka argagaxisada, kuwaasi oo ilaa 2000-ciidan ahaan loo qarameyn doono sida uu sheegay Wasiirka amniga Gudaha Maamulka Hirshabelle Mudane C/qaadir jeelle.
Iyadoo laga duulayo qorshaha Horumarinta iyo Dib u Dhiska Hirshabelle waxa uu goluhu isla qaatay in lasoo horumariyo adeegyada aas-aasiga ah ee arrimaha bulshada, sida Caafimaadka, Biyaha, Waxbarashada, Kalluumaysiga, Xannaanada Xoolaha, Horumarinta Beeraha, iyo dhismaha Waddooyinka.
Ugu danbayn Golaha Wasiirada waxa la horgeeyay Hindise sharciyeedka Wasaaradda Ganacsiga Hirshabelle, iyadoo loo qeybiyay Wasiirada Hindise sharciyeedkaasi shirarka soo socdana looga doodi doono.
Sawirro:- Soomaaliya oo ka tacsiyadeysay geerida Madaxweynihii hore ee Suudaan
Sawrirro:- Taliyaha Booliska gaarka Turkiga ayaa la kulmay madaxda ammaanka Soomaaliya.